Ikanam ìhè Factory | China Ikanam ìhè Manufacturers, Suppliers
70W 100W 150W nnukwu ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ-ọkụ ọkụ
Ojiji nke ọkụ ahụ dị elu nke aluminom na-anwụ anwụ, ezigbo ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ ọkụ na-eme ka ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, na-enwu gbaa, ma na-ejiwanye ike; A na-ewu ike eletrik ugbu a iji hụ na arụmọrụ nke oriọna. Adabara ime ụlọ elu-ọkụ ọkụ, dị ka omumuihe, ọha na eze na ndị ọzọ ogologo ohere oghere.
180V ~ 220VAC aluminum alloy oyi akpọrepu ikanam ala ìhè
The ìhè ahu ka nke aluminum alloy nkenke anwụ-mgbatị, àjà ihe ọ -ụ -ụ-mkpa Ọdịdị, ala ìhè emitting mode, n'elu ntụ ntụ elu okpomọkụ gwọọ ọgwụgwọ, corrosion eguzogide. Usoro oriọna ahụ na-enye LEDSMB2835 dabere na ọkọlọtọ American Energy Star, na obere ire ere ọkụ na arụmọrụ ọkụ dị elu. Mitsubishi ngwa anya mgbasa efere, softer ìhè, elu ìhè mmepụta arụmọrụ. Kwado ikike ike dị elu dịpụrụ adịpụ-ike ugbu a, atụmatụ dị elu dị elu, nhọrọ nhọrọ siri ike, ule siri ike, iji hụ na oriọna na-arụ ọrụ ogologo ndụ. Ebe di nma: artlọ ihe nkiri nka nka, ụlọ mara mma, ụlọ nkwari akụ dị elu, nnukwu ụlọ ahịa na-azụ ahịa na ọkụ ndị ọzọ dị n'ime ụlọ.
aluminum gusset efere kwụsịtụrụ n'uko ikanam dị ọcha panel ìhè
Bright ìhè na-abịa kpamkpam dị larịị, na a wider luminance n'akuku. Ọdịdị sekit pụrụ iche, iji zere otu oriọna na-adịghị mma na-emetụta mmetụta zuru oke, na-enweghị nnyonye redio, agaghị emerụ gburugburu ebe obibi. Nchekwa ike, nchapụta dị elu, enweghị mercury, enweghị infrared, ọ dịghị ULTRAVIOLET, enweghị nnyonye aka electromagnetic, enweghị mmetụta ọkụ, enweghị ụzarị ọkụ, enweghị nsogbu stroboscopic. Light light na mfe iji wụnye. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ nzukọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọfịs, iji azụmaahịa, ebe obibi ma ọ bụ akụrụngwa ọha na eze, ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ ebe achọrọ ịchekwa ike na agba ọkụ ntụgharị agba dị elu.
Klas 1 ike ịchekwa bevel onu ikanam dị ọcha
Bright ìhè na-abịa kpamkpam dị larịị, na a wider luminance n'akuku. Ọdịdị sekit pụrụ iche, iji zere otu oriọna na-adịghị mma na-emetụta mmetụta zuru oke, na-enweghị nnyonye redio, agaghị emerụ gburugburu ebe obibi. Nchekwa ike, nchapụta dị elu, enweghị mercury, enweghị infrared, enweghị ultraviolet, enweghị nnyonye aka electromagnetic, enweghị mmetụta ọkụ, enweghị ụzarị ọkụ, enweghị nsogbu stroboscopic. Light light na mfe iji wụnye. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ nzukọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọfịs, iji azụmaahịa, ebe obibi ma ọ bụ akụrụngwa ọha na eze, ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ ebe achọrọ ịchekwa ike na agba ọkụ ntụgharị agba dị elu.
Klas 1 ike ịchekwa igwe anaghị agba nchara ọkụ ọkụ dị ọcha
Bright ìhè na-abịa kpamkpam dị larịị, na a wider luminance n'akuku. Ọdịdị sekit pụrụ iche, iji zere otu oriọna na-adịghị mma na-emetụta mmetụta zuru oke, na-enweghị nnyonye redio, agaghị emerụ gburugburu ebe obibi. Nchekwa ike, nchapụta dị elu, enweghị mercury, enweghị infrared, enweghị ultraviolet, enweghị nnyonye aka electromagnetic, enweghị mmetụta ọkụ, enweghị ụzarị ọkụ, enweghị nsogbu stroboscopic. Light light na mfe iji wụnye. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ nzukọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọfịs, USES azụmahịa, ụlọ obibi ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọha na eze, ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ ebe achọrọ ịchekwa ike na ọkụ na-acha ọkụ agba agba.
Klas 1 ike ịchekwa ụdị ihu ọkụ dị ọcha
Bright ìhè na-abịa kpamkpam dị larịị, na a wider luminance n'akuku. Ọdịdị sekit pụrụ iche, iji zere otu oriọna na-adịghị mma na-emetụta mmetụta zuru oke, na-enweghị nnyonye redio, agaghị emerụ gburugburu ebe obibi. Nchekwa ike, nchapụta dị elu, enweghị mercury, enweghị infrared, ọ dịghị ULTRAVIOLET, enweghị nnyonye aka electromagnetic, enweghị mmetụta ọkụ, enweghị ụzarị ọkụ, enweghị nsogbu stroboscopic. Mfe dị mfe, dị mfe ịwụnye, kwesịrị ekwesị maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ conferenceụ, ụlọ nzukọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọfịs, iji azụmaahịa, ebe obibi ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọha na eze, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ chọrọ nchekwa nchekwa na ọkụ dị elu.